परराष्ट्रमन्त्री अाज चीन जाँदै, कहाँ पुगे चीनसँग भएका सम्झौता ? – Halkaro
परराष्ट्रमन्त्री अाज चीन जाँदै, कहाँ पुगे चीनसँग भएका सम्झौता ?
काठमाडौँ । उत्तरी छिमेकी चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन् । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् ।
← प्रधानमन्त्रीको विद्यालय भर्ना अभियानले छनु सकेन अपांगता भएका बालबालिका
बैशाख ९ गते पार्टी एकता नहुने ! →